Tirakoobka Dukaanleyda Shabakadda Internetka | Martech Zone
Sabtida, Maarso 19, 2016 Sabtida, Maarso 19, 2016 Douglas Karr
Dhowr usbuuc ka hor ayaan tijaabiyey Liistada guji, Kroger dukaanka raashinka internetka. Nidaamku wuxuu ahaa mid aan nusqaan lahayn, oo leh tan faa'iidooyin badan oo ku saabsan dukaamaysiga. Marka hore, waxaan awooday inaan daawado miisaaniyaddeyda inta shay kasta aan ku kordhinayo gaadhigayga. Waxaan awooday inaan si cad u arko shay kasta oo iib ah. Nidaamku wuxuu raacay alaabtayda ugu caansan ee aan soo iibsaday. Oo waxay igu qaadatay 10 daqiiqo inaan kor u kaco, kooxda Kroger ha rarto baabuurkeyga, oo fiiri.
Haddii aan haysto mid ka mid ah cabashooyinka dhabta ah ee soo ifbaxaya waxay ahayd in kooxdu ku bedeshay Claussen pickles Vlasic. Malahayga waxa weeye in qofka raashinka keenaya uu eegayay qaybta qajaarka qaarkiis halkii uu ka arki lahaa qaybta qaboojiyaha ee bakhaarka. Dadow!
Taasi waa qiime yar oo la bixiyo, in kastoo! Layaab ma leh in eGrocery wax ku dhufto korsasho laba lambar ah gudaha 2016:
40% ee dukaamada dukaameysiga ee internetka ee 2015 ayaa sheegay in dukaankooda aasaasiga ahi aanu bixin eCom, taas oo muujinaysa iibka lumay iyo fursadaha daacadnimada ee kuwa dukaamada aasaasiga ah.
64% ka mid ah kuwa isku dayay dukaamaysiga wax iibsiga ee khadka tooska ah waxay u beddelayaan dukaamada dukaamada khibrad dijitaal ah oo weyn
GenX, ragga iyo kuwa carruurta leh waa qaybaha ugu koritaanka badan eGrocery sannadkan
The 2016 Dukaameeyaha Khadka Tooska ah ee Online infographic waxay wadaagtaa xogta warbixintii ugu dambeysay ee Unata. Warbixinta ayaa muujineysa isbeddelada eCommerce ee 2016 oo ay ku jiraan: ragga ayaa aad u xiiseynaya eGrocery, GenX waa qaybta ugu dhaqsaha badan ee eGrocery iyo macaamiisha carruurta leh ayaa loogu talagalay khadka tooska ah. Waxaan ahay ciyaar kufiican tirada dadka!
Tags: liiska gujidadkaecommercecunsuriyadadukaan raashintirada dadka wax iibsanayaadeegga suuqakrogerliiska krogersuuqa krogerdukaanka internetka
Saameynta ku socoshada caalamiga ah ee barnaamijka moobiilkaaga
14, 2016 at 7: 02 AM
Waad salaaman tihiin, Waad ku mahadsan tihiin sida aad u wadaagteen baloog wacan .... maqaal aad u waxtar leh. Ganacsiga raashinka ee internetka ee Hindiya si xawli ah ayuu usii kordhayaa.Waan jeclahay maqaalkaaga maxaa yeelay imika maalmo qof kastaa wuxuu raadiyaa teknoolojiyaddii ugu dambaysay oo si fudud loo qabtay.